नेपालको राष्ट्रिय राजनीति झन् पछि झन् सङ्कटको भुमरीमा फस्दैछ । राष्ट्रिय सङ्कट विमोचनका लागि संविधान कार्यान्वयन अनिवार्य छ । संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा तीनवटा बलिया पहाड उभिएका छन् । पहाड पन्छाउने बुढो मान्छे शिथिल र कमजोर बन्दै छ । बुढो मान्छेका सन्तानहरू तितरवितर भएका छन् । कति विदेश पलायन भइसके । देशको अर्थतन्त्र थलिएको छ । विचार साँघुरिँदै छ । मनहरू धमिलिएका छन् । दलहरू सिँगौरी खेल्दै छन् । अग्रगमन अवरुद्ध छ । देशले निकास खोजेको छ । जनताले शान्ति र सम्मृद्धि चाहेका छन् । प्रतिगमनले फँणा फिजाउँदै छ ।
तीन ठूला दल समेत मिलेर संविधान घोषणा भयो । नयाँ संविधानको घोषणासँगै दक्षिणमा नयाँ संविधानको विपक्षमा अजङ्गको पहाड खडा भयो । उखरमाउलो गर्मीमा विषालु सर्प निस्के, धेरैलाई डसे । अनाहकमा धेरैको ज्यान गयो । गोमनले देशै डस्यो । त्यही बेला भूकम्प गयो । छिमेकीले बाटो छेक्यो । राष्ट्रियता कुण्ठित भयो । अर्थतन्त्र चौपट भयो । राजनीति अवरुद्ध भयो ।
संविधान घोषणा हुँदा दुई ठूला दलको सरकार थियो । समस्याको समयमै पहिचान गरी समाधान दिनुपथ्र्यो । राष्ट्रिय सङ्कटभन्दा पनि सत्ता परिवतर्ननको हतार भयो । नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार दोस्रो ठूलो दलले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पड्कायो । मधेस झन् पछि झन् सङ्कट थपियो । भोटको दम्भ देखा प¥यो । सामन्ती अहं र चोथाले मुखले वातावरण झन् बिगा¥यो । विपक्षीलाई विश्वासमा लिएर समस्याको पहिचान गरी पहाड पन्छाउन पहल र प्रयत्न भएन । समस्याको पहिचान र समाधानको पहल सत्तापक्षको दायित्व हो । अन्तरविरोध पैदा गर्नु नेतृत्वको सफलता होइन । कुशल शासकको पहिचान अन्तरविरोधको समाधान हो । दोस्रो ठूलो दलले लामै समय शासन गर्दा अन्तरविरोध पैदा गर्न सफल रह्यो । समाधान दिन सकेन । त्यसैले संविधानको विपक्षमा उभिएको दक्षिणतिरको पहाडको उचाइ झन् थपियो ।
सङ्घीयता विरोधी शक्ति संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा उभिएको अर्को ठूलो पहाड हो । परिवर्तन विरोधी शक्ति हिजोदेखि नै संविधानको विपक्षमा छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको विपक्षमा उभिएको शक्तिले देशमा अस्थिरता र भाँडभैलो फैलाएर आन्दोलनका उपलब्धि समाप्त गर्न चाहन्छ । संविधानसभा कतिपय राजनीतिक पार्टीको एजेण्डा थिएन । गणतन्त्रलाई आत्मसात् गर्न नसकेका कथित वामपन्थीहरूले प्रथम संविधानसभा असफल गराएको तीतो सत्य अगाडि छ । परिवर्तनको पछिल्लो एजेण्डा अनुसरण गर्न वाध्य राजनीतिक दलभित्रको यथास्थितिवादी धङ्धङी समेतको सङ्घीयता विरोधी प्रतिगामी संयुक्त मोर्चा नयाँ संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अजङ्गको पहाड बनेर उभिएको छ । यसको उचाइ झन् पछि झन् थपिँदै छ । परिवर्तनका एजेण्डा संस्थागत गर्न यो शक्ति जिम्मेवार र जवाफदेही छैन । अरुको एजेण्डा बोक्ने रहर पनि छैन । ०४७ सालको संविधान फर्काएर जनतामाथि शासन गर्ने सपनाबाट यो शक्ति अझै ब्युँझेको छैन । झिनमसिना राजावादीदेखि आधुनिक ‘रायमाझी’सम्म यो पहाडी शृङ्खलामा सामेल छन् ।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री दलभित्र एउटा डरलाग्दो गुटगत पहाडी शृङ्खला खडा भएको छ । सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, स्रोत साधन चर्चिने होडबाजीमा सबै मूल्य मान्यता भुलिँदै छन् । आत्मकेन्द्रित दलीय स्वार्थले नेता गणलाई मतान्ध र मुढाग्रही बनाएको छ । राष्ट्र र जनताप्रतिको जवाफदेही भुलिएको छ । दुराग्रहको पहाड खडा भएको छ । राष्ट्र , जनता भुलिएको छ । नीति, विचार, दर्शन छोडिएको छ । आत्म वेचिएको छ । माउ नेता प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा मात्र केन्द्रित भएका छन् । नेता छोटिएका छन् । आफ्नो हैसियत र सीमा भुलिएको छ । बेइमानीको पहाड खडा भएको छ । अरुको खुट्टा तान्ने र अरुलाई होचो देखाउने काम भएको छ । आफूलाई मात्र महान ठान्ने दम्भ र घमण्डको पहाड खडा भएको छ । र, यसैकारणले संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या भएको छ । अब के गर्ने ?
तीन पार्टी समेत मिलेर संविधान घोषणा गरे । संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि तिनै पार्टी मिल्नुको विकल्प छैन । संविधान घोषणा हुनेबेला असहमत पक्षलाई सहमतिमा ल्याउनु तीनै दलको जिम्मेवारी हो । यो देश कुनै एउटा दलको वपौती होइन । यसलाई कसैले बन्धक बनाउन पाईदैन । देशका दुई ठूला दलको दायित्व हो संविधान कार्यान्वयन गर्ने । दुई ठूला दल सत्तामा हुँदा मधेसी र जनजातिलाई सहमत हुने संविधान बनाउन असफल भए । जिम्मेवार पार्टीले जनतालाई मिलाउन सक्नुपर्छ । जनतालाई फुटाएर सत्ता स्वार्थ पुरा गर्नु राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी होइन । भाँडभैलो मचाउन जसले पनि सक्छ । देश सम्हाल्न ठूलो दलले हैसियत देखाउनुपर्छ । एमालेले मधेसीप्रतिको आग्रह त्याग्नुपर्छ । सङ्घीयता विरोधी मानसिकताबाट माथि उठेर देशको नेतृत्व गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।
सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्ध दुश्मनीपूर्ण देखिँदैछ । यो लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । दल छन्, दलका आ–आफ्ना मान्यता छन् र त दलीय व्यवस्था छ । निषेधको राजनीति निरंकुशतामा मात्रै सम्भव छ । दलीय प्रतिशोध होइन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा समावेशी लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । सहमति र सहकार्यको संस्कृति नयाँ संविधानको विशेषता हो । प्रतिपक्ष र असहमत पक्ष वार्ताको टेबुलमा बसेर सङ्घीयता र सीमाङ्कनबारे न्यूनतम सहमति बनाउन सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
सङ्घीयता संस्थागत गर्न सीमाङ्कनको समस्या समाधान गर । जिम्मेवार नेताले मेरो निर्वाचन क्षेत्र के हुन्छ भन्ने अत्यन्तै निम्छरो सोच राखेर देशलाई बन्धन बनाउन पाइँदैन । नेताका स्वार्थलाई जनताका भावनामा उराल्न पनि हुँदैन । सीमाङ्कन मिलान गर्दा राष्ट्रियता खण्डित हुन्छ भन्ने झुटो प्रचार नगरौँ । पञ्चायतले विभाजन गरेका जिल्ला अहिलेसम्म कतै गएका छैनन्, कसैले लगेका छैनन् । सङ्घीय संरचना मिलान गर्दा देश टुक्रिन्छ भन्ने नितान्त झुट र बेइमानी प्रचारबाजी गरेर जनतालाई धोका दिने र दुःख दिने काम नगरौँ । धनुषा, सप्तरी, महोत्तरी समेतका मधेसका जिल्लाले भारतमा मिसिन्छौँ वा भारतमा मिसाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेका होइनन् । मधेसमा बस्ने थारूलाई अविश्वास नगरौँ । कपिलवस्तुका मुसलमानहरूले भारत शासित राज्य हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छैनन् । मधेसी, आदिवासी, जनजाति महिला मुस्लिम समेतका उत्पीडितलाई अधिकार दिन सङ्घीयता हो भने सीमाङ्कनमा एमाले किन यतिविधि दुराग्रही हुनुप¥यो ? वार्ताको टेबुलमा बस । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख । खुला दिलले छलफल गरेर देशलाई निकास दिन सबै जिम्मेवार बन ।
सङ्घीयताको रक्षाका लागि त्यसको पक्षमा रगत पसिना बगाउनेका बीच दह्रो एकता, सुझबुझ सहकार्य र विश्वास आवश्यक छ । पछिल्लो समयमा मधेसी मोर्चा लचिलो भएर प्रस्तुत हुँदैछ । थारू, मधेसी र मगरातका भावना समेट्न संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले संसद्मा पेस गरेको छ । प्रतिपक्ष प्रस्तावबारे छलफलै गर्न नसकिने हठ बोकेर सडकतिर कुदेको छ । यो लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । छलफल गरेर असफल गराउनु नै प्रतिपक्षको सुल्टो बाटो हो । तोडफोड, आगजनी बन्द जस्ता अराजक गतिविधि जनताले मन पराउन छोडेका छन् । के संसदीय प्रणाली यस्तै भद्दा खेलको पटाक्षेप मात्रै हो ?
माओवादी केन्द्र अहिले सरकारमा छ । जनताले तेस्रो स्थानमा राखेका छन् केन्द्रलाई । एकमना सरकार कसैको सम्भव छैन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि केपी ओली या माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा आउन पनि सक्नुहुन्छ । कसैको समर्थन चाहिन्छ नै । अरु पार्टीलाई तोडफोड गरेर त्यो अभीष्ट पूरा हुन सक्दैन । छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय सहमति गरेर निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । त्यसैले एमाले सडकमा समय खेर फाल्नुभन्दा पनि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर चुनावी वातावरण बनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै दल मिलेर सीमाङ्कनको टुङ्गो लगाउनु प्राथमिक महìवको विषय हो । त्यसले राजनीतिक संक्रमणको अन्त गर्नेछ । दोस्रो महìवको विषय स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पु¥याएर स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कामलाई प्राथमिक महìव दिनु हो । तेस्रो प्रदेश सभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र आवश्यक ऐन कानुन निर्माण अनिवार्य छ । त्यसका लागि जिम्मेवार पार्टीबीच सहमति हुनु अनिवार्य छ । दोस्रो ठूलो दल र प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको हैसियतले एमाले बढी जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय सङ्कट समाधान गर्न फेरि पनि सहमतिको विकल्प छैन ।